Barcelona Oo Lagu Qasbayo Inay Iska Iibiso Philippe Coutinho Iyo Caddaymaha Soo Baxaya Ee Xiddigan U Diidaya Ku Laabashada Camp Nou - Gool24.Net
Barcelona Oo Lagu Qasbayo Inay Iska Iibiso Philippe Coutinho Iyo Caddaymaha Soo Baxaya Ee Xiddigan U Diidaya Ku Laabashada Camp Nou
Xiddiga reer Brazil ee Philippe Coutinho ayaa ka tegi doona Barcelona dhamaadka xili ciyaareedkan, waxaanu heshiis rasmi ah ugu wareegi doonaa naadi kale oo ka dhisan qaaradda Yurub, taas oo loo badinayo inay noqon doonto mid ka mid ah afarta kooxood ee horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League.
Barcelona ayaa hoos u dhigtay qiimaha lagu iibinayo kubbad sameeyahan hore ee Liverpool, waxaanay diyaar u tahay inay ku fasaxdo 80 milyan oo Euro, taas oo aad uga hoosaysa qiimihii ay hore Bayern Munich ugu sheegtay inay amaahda ugu beddeli karto heshiis rasmi ah oo ahaa 120 milyan oo Euro.
Laacibkan oo Blaugrana ay January 2018 kaga soo iibsatay Liverpool lacag dhan 142 milyan oo Gini ayaa la qabsan waayay hannaanka ciyaareed ee kooxda, waxaana laba sannadood oo amaah ah loogu diray Munich, hase yeeshee waxa uu Camp Nou kusoo laaban doonaa dhamaadka xili ciyaareedka.
Sida uu qoray wargeyska Marca ee kasoo baxa Spain, Philippe Coutinho wax mustaqbal ah kuma laha Barcelona, waxaana jirta duruuf kooxda haysata oo soo dedejinaysa inay go’aan adag ka qaadato mustaqbalkiisa oo ay ku iibiso 80 milyan.
Wargeysku waxa uu sheegay in kooxdan reer Spain ay gashay dhibaato dhaqaale oo uu sababay hakadka ku yimid ciyaaraha horyaalka LaLiga iyo deymo lagu leeyahay, kuwaasina qasab kaga dhigayaan inay xiddigan ku iibiso qiimaha aynu sare kusoo sheegnay si ay culaysyada iskaga fududayso.
Arrinta kale ee ku cadaadinaysa inay suuqa dhigto Coutinho, ayaa lagu sheegay mushaharkiisa badan oo waqtigan aanay Barcelona bixin karaynin, iyadoo horeba xiddigaheeda uga dalbatay inay dhimaan mushaharooyinkooda, taas oo aan la isku af-garanin.
Laacibkan oo sannadkii mushahar u qaata 13 milyan oo Euro, ayay Barcelona rumaysan tahay in qiimihiisu hoos usii dhici karo haddii uu xili ciyaareed kale sii joogo.
Warkan ayaa waxa uu farxad gelinayaa kooxaha Chelsea, Manchester United, Manchester City iyo Tottenham oo dhamaantood danaynaya adeegga ciyaareed ee kubbad-sameeyahan